Super Fun n'Ọgba Review maka Ịzụchapụta Kratom extracts
Super Fun n'Ọgba bụ a iwu elu na-ere ihe na-online isi ụlọ ahịa na na-eburu Kratom extracts ndị ọzọ herbal ngwaahịa. Ha na-akọwa ha dị ka "Premiya purveyor nke ihe nile okenye, gụnyere novelties, ise siga na uche ngwá, na a ibu nhọrọ nke nne Ụwa kasị mma na-egbuke egbuke ethnobotanicals. "Ị ga-ahụ a maara nke ọma ika aha dị ka Kratom Agwọ, Captain Kratom, Kaboom Kratom na PEP Kratom rere ha na website. Ha nwere ọnụ ọgụgụ nke ezi reviews site na ọrụ online, ezie na ha na e blacklisted otu isi Kratom ere nyochaa website. Gaa n'ihu na-agụ anyị echiche ma na-azụta site na nke a online ụlọ ahịa. Ịzụta Kratom Online si atụ aro mgbere ebe a.
I kwesịrị Zụrụ Kratom si Super Fun n'Ọgba?
N'agbanyeghị ihe ị na-eche banyere Super Fun n'Ọgba, ha ahia na ha ahịa ọrụ, otu ihe na doro anya bụ na ọ bụrụ na ị na-azụ gị Kratom site na nke a website i nwere ike na-atụ anya iji kwụọ ụgwọ ihe karịrị ị ga ọtụtụ ndị ọzọ elu àgwà ụlọ ahịa. Dị ka ọmụmaatụ, ha na-ebu 4 gram nchịkọta nke Captain Kratom 15x wepụ ntụ ntụ maka $31.95. Otu Ẹkot 4 gram mkpọ jenerik 15x wepụ akanyam na Arena Ethnobotanicals maka $14.99. Super Fun n'Ọgba akanyam a 15 gram ngwungwu Kratom infusion Maeng Da ntụ ntụ maka $29.95 mgbe a yiri na-abụghị ewere ngwaahịa nwere ike zụrụ si Arena maka $22.95 maka 30 grams.
Ihe mere maka price dị iche nwere na-eme na eziokwu na nke a na-ere nanị onunu ewere Kratom extracts na powders. Ndị a na ngwaahịa na-apụghị izere ezere ga-oké ọnụ karịa ma ọ bụrụ na ị bụ ịzụta Kratom nanị na ndabere nke ya nje, isi na ọkwa. Ị na-akwụ ụgwọ ndị ọzọ n'ihi na ika aha na ahịa. Ụfọdụ ndị nwere ike ịzụlite ika iguzosi ike n'ihe kwupụta a kpọmkwem ụlọ ọrụ, ezie na n'ikpeazụ ị ga-ejedebe okodu ọzọ na-enweta ihe bụ mgbe otu isi akwukwo.
Blacklisted site Kratom Association
KratomAssociation.org bụ a website na-ekwusi a ndepụta nke gbaara mgbere Mitragyna Speciosa ka ndụmọdụ na-azụ ma na-achụso ọganihu nke ọrụ n'ire na njem. Ha bụ n'ụlọ a so isi nke 13,000+ ọrụ na isi akụrụngwa nke online Kratom obodo. The Kratom Association kpebiri ka blacklist Super Fun n'Ọgba dị ka a na-ere na i kwesịrị izere. Ha na-akọwa maka nke a dabeere na Super Fun n'Ọgba si nkwalite Kratom dị ka iwu elu na n'ihi na ha na-ere ya n'akụkụ eṅomi ọgwụ ọjọọ.
Anyị na-achọkarị ekweta na-anọchite anya Kratom dị ka iwu elu bụghị kwesịrị ekwesị ahịa n'ihi na nke a na-agwọ ọrịa eke ogwu. Ọ ma na-agba ume nwere amaghi omume si a họrọ nọmba nke na-azụ ndị nwere ike eme ihe n'ụzọ na ya na ọ na-eme ka ọ na-yikarịrị ka a mmachibido iwu a ga-ebugharị na-eme n'ọdịnihu. The iwu ọnọdụ nke Kratom ke USA bụ tenuous n'oge na ọtụtụ na-ekwu na-enwe ebe ma ọ bụ na-atụle-eme ka ọ n'uzo na ezighi ezi umi. Nke a na-agha na-ya iwu na-adịghị aka site mkpakọrịta nke Kratom na "na-elu" ma ọ bụ ndị ọzọ na sịntetik ọgwụ ọjọọ.
Mgbe ị na-kama mata eke uru nke a osisi maka n'ịgwọ mgbu mgbaàmà na rụọ nchegbu na ịda mbà n'obi na a ọgwụ ọjọọ na-free ụzọ, ikpe n'ihi na ichebe Kratom eji dị nnọọ mfe ịghọta. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-eji nke a ogwu ya ka mma ha anụ ahụ na echiche ike ma na-eji ya na dosages na dị mma ma welie ikike iche echiche ka megide dimming ha. Ọ kwesịrị ịdị na-hụrụ ka a eke ọnọdụ emeju na metụtara ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ na ndị dị ize ndụ ma na-enye dịghị ezigbo ike uru. Lelee anyị na ndu ka mmetụta nke Kratom nje ebe a.
Dị ka a n'ji, mkpebi gị ịzụta Kratom site na otu na-ere ma ọ bụ ọzọ bụ akụ na ụba votu na ụlọ ọrụ ahịa omume. O di nwute na, ma ọ bụrụ na mkparịta ụka gburugburu a osisi a na-adịkwaghị na ụlọ ọrụ dị ka Super Fun n'Ọgba, ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ yiri ka anyị ga-otu ụbọchị Tetanụ ịchọta Kratom doo n'uzo na ezighi ezi gafee USA. N'ihi nke a, anyị nwere ike ikwu na ị na-azụta Kratom si a na-ere ndị specializes ke eke herbs na botanicals kama Super Fun n'Ọgba website.
Olee otú ndị dị iche iche Kratom nje kpọrọ ya aha?
Kratom alkaloids Jide Key Iji Ịtụnanya Mmetụta
Kratom adịghị arụ ọrụ? A bụ ihe na-eme